ငါးမန်းအရိုးနု | ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း OEM ODM-shark-cartilage.com
ALL EASY GO FROZEN SEAFOOD CO.,LTD တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့် Export ဖြစ်ပါသည် ငါးမန်းအရိုးနု, အပြာရောင်ငါးမန်း, ငါးမန်းအရိုး တွင် Taiwan။ ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်သောလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်အစဉ်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ဖို့စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကျပ်သောလိုက်နာမှုမှတဆင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားမှုနဲ့ Hard အလုပ်ကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များကိုစိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အမည်ပြော:ငါးမန်း Pectoral တောင်
အမည်ပြော:ငါးမန်း Dorsal တောင်
ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒအမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့နှင့်အတူပေးခွငျးအားဖွငျ့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကျေနပ်မှု ' ဖောက်သည်အောင်မြင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်
နှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ထားထက်ကျော်လွန်ကြောင်းန်ဆောင်မှု။ ဒါဟာအသေးစက်မှုလုပ်ငန်းကနေထုတ်လုပ်ယူနစ်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကို၏အတိအကျလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်မှတ်သားဖွယ်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ခြင်း, ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို, ငါးမန်းအရိုးနု ငါးမန်းအရိုး, ငါးမန်းတောင်, ငါးမန်းတန်း, ငါးမန်းအသား, ငါးမန်းအရိုးနု Powder, Chondroitin sulfate နှင့်ငါးမန်းဇီဝသိပ္ပံပစ္စည်းအဖြစ်ငါးမန်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းအဆိုပါပစ္စည်းထောက်ပံ့အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် ဤအငါးမန်းထုတ်ကုန်များ၏ကယ်လစီယမ်, ဖော့စဖောရက်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းတစ်မိသားစုပါရှိသည်။ သူတို့ကသာယင်း၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြောင်း, သွေးဖိအားနှင့်သွေးအဆီသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ, ဒါပေမယ့်လည်းအလှအပနှင့်အရေပြားကျန်းမာရေးဒါ့အပြင်အကျိုးရှိသော။ ထို့အပွငျ, ငါတို့သည်လည်းပြီးသားလည်းကျယ်ပြန့် osteoarthritis ၏ကုသမှုများအတွက်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသောအစားအစာကနေရိတ်သိမ်းကြပြီကြောင်းငါးမန်းအမှုန့်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းနေကြတယ်, ဒါကြောင့်အပေါ်ငြိမ်းစေလျက်နှင့်အနာ။ ငါးမန်းအရိုးနု ငါးမန်းတောင်များနှင့်ငါးမန်းအရိုးနု Powder စသည်တို့ကိုတူသောကျွန်ုပ်တို့၏ငါးမန်းထုတ်ကုန်အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီသန့်ရှင်းရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာမြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ပွီ, ငါတို့သည်လည်းကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း
ALL EASY GO FROZEN SEAFOOD CO.,LTD လိပ်စာ: NO.9 ALLEY6LANE 314 HWA-CHENG RD. HSIN-CHUANG AREA,NEW TAIPEI TAIWAN R.O.C., NEW TAIPEI, Taiwan	တဲလ်: +886-2-22779677 ဖက်စ်: +886-2-81926803